Shirwaynaha wada tashiga arimaha caafimaadka ee dalka itoobiya ka furmay xarunta deegaanka ee jijiga. - Cakaara News
Shirwaynaha wada tashiga arimaha caafimaadka ee dalka itoobiya ka furmay xarunta deegaanka ee jijiga.
Jigjiga(CN) Jimce March 13-2015. Shirwaynahah wadatashiga arimaha caafimaadka ee ka furmay magaalada jijiga oo ay ka soo qaybgaleenka dhamaan masuuliyiinta xafiisyada caafimaadka ee 9ka deegaan iyo ismaamulada magaalooyinka.
haddaba waftigii hogaaminayay shirkani ayaa maata lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee garad wiil waali international Airport waxaana hogaaminayay waftigan wasiirka wasaarada caafimaadka JDFI dr kasate burhan admasu .
Waxaana ku so dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee jiiga masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI oo ay ka mid yihiin ku simaha madaxwaynaha DDSI ahna wasiirka madaxtooyada DDSI marwo sucaad ahmed faarax, madaxwayne ku xigeeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir xasan iyo waliba ku simaha wasiirka caafimaadka ahna ku xigeenka caafimaadka DDSI mudane dr cumar maxamed .
Haddaba shirkan oo manta galinkii danbe ka furmay hoolka shirarka ee xamda huteel ayaa waxaa si qoto dheer loogu gorfaynayay tayada waxqabadka iyo adeeg bixinta dhinaca caafimaadka ee daleena itoobiya iyada oo diirada la saarayay heerka uu gaadhsiisan yahay adeega caafimaadka ee dalkeena itoobiya .
Shirkan oo sii socondoona maalmaha food inagu soo haya ayaa noqondoona mid lagaga midho dhalindono sii xoojinta adeega caafimaadka